Mpanamboatra sy mpamatsy tranofiara finday | China Mobile Led Trailer Factory
Jingchuan 4㎡ mobile LED trailer （Model ： E-F4） dia antsoina hoe "fody kely, nefa manana ny faritra dimy", ary antsoina hoe "BMW mini" amin'ny andian-tsarimihetsika jingchuan.
JCT 12㎡mobile LED voalohany no nipoitra tamin'ny volana septambra 2015, fampisehoana LED iraisam-pirenena Shanghai, rehefa nahasarika ny sain'ny mpizahatany maro ny trano sy ny any ivelany, ny loko matevina matevina feno loko tsy voafaritra mazava, ny fanamafisam-pahefana mahery stereo ivelany, mifanaraka amin'ny famolavolana endrika estetika mahazatra
JCT 16m2 finday LED tranofiara （Model ： E-F16） dia natolotry ny orinasa jingchuan mba hamaly ny filan'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Ny haben'ny efijery 5120mm * 3200mm dia afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa amin'ny efijery lehibe lehibe.
Ny endrik'ilay JCT 22m2 mobile LED trailer （Model ： E-F22） dia aingam-panahy avy amin'i Bumblebee ao amin'ny sarimihetsika "Transformers". Miaraka amin'ny fisehoana mavo mamiratra, ny chassis an'ny tranofiara dia tena malalaka sy feno fanjakazakana.
JCT 12㎡ scissor type mobile LED tranofiara no voalohany tamin'ny 2007 nanomboka nikaroka sy namolavola, ary napetraka tamin'ny famokarana, aorian'ny taona maro dia nitombo tsy tapaka ny teknika, efa lasa matotra indrindra amin'ny orinasa taizhou JingChuan koa dia iray amin'ireo malaza indrindra
Kamiaona finday taratra finday, Nentina amidy kamiao finday, Mobile Led Billboard kamiao, Led Mobile Trailer, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Led Mobile kamio,